Nambara ireo mpandresy tamin'ny mari-pahaizana momba ny fizahantany gay!
Home » LGBTQ » Nambara ireo mpandresy tamin'ny mari-pahaizana momba ny fizahantany gay!
Desambra 29, 2020
The 2020 Loka momba ny fitsangatsanganana an-tany gay nanambara ireo mpandresy androany.
Amin'ny taona fahadimy, ny iraky ny Gay Travel Awards dia ny manaiky sy manome valisoa ny trano fonenana, toerana itodiana ary orinasa fitaterana manerantany. Ireo fikambanana miavaka ireo dia mitarika ohatra ary manampy amin'ny fitaomam-panahy ireo orinasa hafa sy marika hanaraka ny toe-tsain'izy ireo amin'ny fahasamihafana sy ny maha-tafiditra. Miezaka ihany koa izy ireo hanatsara hatrany ny fampitaovana, ny fiarovana ary ny hatsaran'ny serivisy.
Tamin'ity taona ity, ny Gay Travel Influencers dia nampiana voalohany ihany koa, ary ny sokajy vaovao dia fanatsarana lehibe sy manamarika.
Ity taona ity dia tsy nisy toa an'io. Miaraka amin'ny areti-mandringana manerana izao tontolo izao, mpandeha maro no voarara tsy mandeha na miandry fotoana azo antoka. Mandritra izany fotoana izany, manome ny fotoana fohy ho an'ny mpandeha ny The Gay Travel Awards mba hifantohana amin'ny tsara indrindra amin'ny indostria ho toy ny teny fampidirana amina fotoana mety kokoa hiverenana any.
Ny lisitr'ireo sokajy sy mpandresy amin'ity taona ity dia voatanisa etsy ambany:
ALOHA AMIN'NY SADY & SORATRA / INN
Inn ao amin'ny Alameda
Fox manofa fiara
Costa Rica, Amerika afovoany
Puerto Rico, Karaiba
Andaz Hollywood Andrefana
Hotely Four Seasons Mexico City
Hilton Los Cabos Beach Resort Golf
HOTEL, SPA & FITSARANA
Ny Lodge ao amin'ny Castle Ashford
Ny sary famantarana ny lamaody Pierre Cardin dia maty tamin'ny faha-98 taonany
Ny FAA dia mametra ny fiasan'ny drôna amin'ny toerana marefo amin'ny fiarovana ny firenena